ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှအရည်အသွေးမြင့် အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ကြေးစားတစ်ခုဖြစ်တယ် အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan။ မည်သည့်အရေအတွက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်။ ရန်လိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း OEM, နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ။ ခိုင်နောက်ခံအရောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနား BRAND ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ သင်ကြိုးစားဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC DUCTILE သံအပူစွမ်းအင် STEAM ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.D50 ●DUCTILE သံခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K x ကို 230̊ဂ. ●DSC D50 အပူအအေးနှင့်အပူချိန်အခြေအနေများရှိရေငွေ့စားသုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အပူနှင့်ကင်းဝေးစေနိုင်သော CAP ဖြင့်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်များ။. ●DISC နှင့်ထိုင်ခုံ LIGHT BAND ကို FLATNESS တွေ့ဆုံရန် LAPPED နေကြသည်,လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုင်ခုံနှင့် disc ကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နိုင်ပါသည်. ●ဤပုံစံသည်ရေနွေးငွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မဟုတ်ပါ. ●တစ်ခုတည်းသောဝက်အူချိတ်. ●အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပိုက်လိုင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်,ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.D50
DSC CAST သံမဏိသဏ္AMာန် STEAM ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.D60,D60F ●သံမဏိခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 46K 425 x ကို̊ဂ. ●DSC D60 ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုကာကွယ်နိုင်ရန်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျရေနွေးငွေ့ကို insulator တွင်လည်းအသုံးပြုထားသည်။. ●DISC နှင့်ထိုင်ခုံ LIGHT BAND ကို FLATNESS တွေ့ဆုံရန် LAPPED နေကြသည်，လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုင်ခုံနှင့် disc ကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နိုင်ပါသည်. ●SCREWED OR အနားကွပ်ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်ပါသည်. ●အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်. ●တစ်နှစ်အာမခံ.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.D60
အားလုံးသံမဏိသံမဏိထောင်ချောက် DSCမဟုတ်ဘူး.D75,D75F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် S အားလုံး.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 46K 430 x ကို̊ဂ. ●DSC D75 ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုကာကွယ်နိုင်ရန်အပူစွမ်းအင်သုံးအပူစွမ်းအင်သုံးရေစုပ်စက်ဖြင့်ပိတ်. ●DISC နှင့်ထိုင်ခုံ LIGHT BAND ကို FLATNESS တွေ့ဆုံရန် LAPPED နေကြသည်，လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုင်ခုံနှင့် DISC တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နေကြသည်. ●SUPERHEATED ရေနွေးငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံ D75 ကိုသုံးနိုင်သည်. ●အနားကွပ်သို့မဟုတ်ကွန်နက်ရှင်များရရှိနိုင်ပါသည်. ●အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်. ●ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များအရထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်:ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလက်မှတ်,စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ,မူလနှင့် WPS ၏လက်မှတ်/PQR.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.D75
DSC သံမဏိထောင်ချောက်များမဟုတ်ဘူး.D80,D80F ●သံမဏိကိုယ်ထည်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 46K 430 x ကို̊ဂ. ●DSC D80 အပူနှင့်အပူချိန်ကာလအတွင်းရေရှည်သုံးစွဲမှုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်မဲ့ CAP ဖြင့်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်များ။. ●DISC နှင့်ထိုင်ခုံ LIGHT BAND ကို FLATNESS တွေ့ဆုံရန် LAPPED နေကြသည်，လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုင်ခုံနှင့် disc ကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နိုင်ပါသည်. ●ဤပုံစံကို သုံး၍ ရေနွေးငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်,ရေနံဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းအင်စက်ရုံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. ●ဝက်ဝံ,SOCKET WELD သို့မဟုတ် FLANGE ချိတ်ဆက်မှုများရရှိနိုင်. ●အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.D80